ICilbridge Archives - IntoKildare
Landela ezinyathelweni zika-Arthur Guinness, mhlawumbe igama elaziwa kakhulu e-Ireland, uphumule ngopende kwelinye lamahostela asemgwaqweni omkhulu ophawula lapho azalelwa khona. Isifanekiso sakhe sobukhulu bokuphila sibonisa le ndawo eyisithonjana lapho achitha khona iningi ebuntwaneni bakhe. Ukusuka lapha ungalandela iNdlela ka-Arthur iye e-Ardclough lapho kunesikhungo nombukiso okuhumushekayo, bese uya phambili e-Oughterard Graveyard - indawo yakhe yokugcina yokuphumula.
Zulazula emlandweni kuCelbridge Heritage Trail - usuka ku-Christian Tea Lane yakuqala, indawo yokuphumula yamaGrattans; kuNdlu kaSomlomo uConnolly's Castletown House - indawo yokuhlala enhle kunazo zonke e-Ireland; bese udlulela emlandweni waseCelbridge Village uthatha umzila onokuthula ongasemfuleni noma umgwaqo ohlonipheke ogcwele umuthi wokuvakashela amagceke aseCelbridge Abbey nezixhumanisi eziya kuJonathan Swift. Kwabajaha ngokwengeziwe, kungani ungajabuleli ukugibela isikebhe wehle ngomfula iLiffey, ibhodi eligwedla eCliff of Lyons noma umjikelezo ogudle iGran Canal ngaseSallins.